L3 + Wareeji Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha L3 + Warshad Bedela
CS6200-52X-P-EI Dual Stack 10G 48 Ports PoE Ethernet Wareejinta
CS6200-52X-P-EI 10G iskudhafida wadista PoE waxay leedahay qalab casri ah iyo naqshadeynta qaab dhismeedka software. CS6200-52X-P-EI waxay bixisaa helitaan sare, miisaan, amniga, waxtarka tamarta, iyo sahlanaanta hawlgalka oo leh astaamo hodan ah sida VSF, IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt iyo sahay koronto oo xad dhaaf ah. Waxay ku habboon tahay isu-geynta cufnaanta sare ama lakabka asaasiga ah ee shabakadaha kambaska ama shabakadaha SMB. Astaamaha Muhiimka ah iyo Waxyaabaha ugu Muhiimsan 60W PoE 8-da Poe ee ugu horeeya waxay taageeraan IEEE 802.3bt (60w). Waxay noqon karaan ...
CS6200-28X-HI-24F Waxqabadka Sare 10G Bedelka Fiber Fiber Buuxda
CS6200-28X-HI-24F jiilka soosocda 10G biiro isdabajoog ah ayaa leh qalab casri ah iyo naqshadeynta naqshadeynta software, oo lagu dhisay qaabab koronto 1 + 1 ah. CS6200-28X-HI-24F waxay bixisaa helitaan sare, miisaan, amniga, waxtarka tamarta, iyo sahlanaanta hawlgalka oo leh astaamo awood leh sida VSF (Virtual Switch Framework), sahay koronto oo xad dhaaf ah iyo OpenFlow. Waxay ku habboon tahay isu-geynta cufnaanta sare ama lakabka asaasiga ah ee shabakadda xerada, ISP, iyo ganacsiga. Astaamaha Muhiimka ah iyo Highl ...
CS6200-8G24S2Q-EI Dual Stack 40G Ethernet Marinka Fiber Switch
DCN CS6200-8G24S2Q-EI waa L3 leexleexasho waddo isdabajoog ah oo leh 40GE fiber uplink port. CS6200-8G24S2Q-EI waxay leedahay qalab casri ah iyo naqshadeynta naqshadaha dhismaha, oo lagu dhisay laba koronto oo siyaado ah. CS6200 waxay bixisaa helitaan sare, miisaan, amniga, waxtarka tamarta, iyo sahlanaanta hawlgalka iyadoo la adeegsanayo astaamo hal abuur leh sida VSF (Virtual Switch Frame-work) iyo 3 qaybood oo iswada hagaajiya oo iswada hagaajiya. Waxay ku habboon tahay isku-xirnaanta cufnaanta sare ee shabakadaha Enterprise ama shabakadaha Campus. Wixii SMB, CS62 ...